Huawei Mate X - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း | Androidsis
ရက်သတ္တပတ်စုံတွဲတစ်တွဲ Huawei သည် MWC 2019 တွင်၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်, ဘယ်မှာသူတို့တစ်တွေတင်ပြချက်ဖြစ်ရပ်သွားခဲ့ကြသည်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဘာစီလိုနာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပွဲ၏ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြစ် များစွာသောသတင်းကိုသင်တို့ထံမှမျှော်လင့်ရသည်အထူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိသောထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ခေါက်ထားသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ Huawei Mate X ကိုပွဲတွင်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
မနေ့ကပဲဖုန်းရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်။ ပိုစတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီတင်ဆက်မှုအခမ်းအနားမတိုင်ခင်အထိပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ Huawei Mate X အကြောင်းသိပြီးဖြစ်သည်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသော Samsung Galaxy Fold.
ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းများသည်စမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုလပေါင်းများစွာကပင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် ယခုနှစ်အကြီးအခေတ်ရေစီးကြောင်း။ ယခုတစ်ပတ်အတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပိုင်း၌အရေးအကြီးဆုံးမော်ဒယ်လ် ၂ ခုရှိသည်။ Huawei Mate X နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည် Samsung နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောခေါက်သည့်စနစ်ကိုလောင်းပါ.
၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကတင်ပြခဲ့သောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်မတူညီသောစက်ပစ္စည်းတစ်ခုရရှိရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ဒါ့အပြင် အထူးသဖြင့်အလွန်ဒဏ်ငွေဖြစ်ခြင်းများအတွက်ထွက်ရပ်ဤပစ္စည်းအမျိုးအစားတွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ဒီတော့မတူညီတဲ့အယူအဆတစ်ခု၊ ဘယ်နေရာမှာမဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Huawei Mate X
2 Huawei Mate X - ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုထူးခြားမှုတစ်ခုအဖြစ်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Huawei Mate X
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းနည်းပညာအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကွာအဝေးအားလုံး၏ထိပ်တွင်ရှိသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းပြီးပြည့်စုံတဲ့ကိရိယာတစ်ခုနဲ့ချန်ထားခဲ့တယ် သူတို့၏တင်ပြချက်တွင်သူတို့သည်ဒီဇိုင်းတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအလေးထားလိုကြသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချန်လှပ်ထားသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလျစ်လျူရှုရန်မလိုဘဲ။ ဒါကြောင့်ဒီကိရိယာထဲမှာသော့ချက်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤလများမှတ်ချက်ချထားသကဲ့သို့ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ -
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Huawei Mate X
ပုံစံ အိမ်ထောင်ဖက်က X
operating system အလွှာတစ်ခုအဖြစ် EMUI 9.0 ဖြင့် Android9Pie
ဖန်သားပြင် ၈ လက်မ resolution (၃၁၂၀ x ၁၄၄ pixels) (၆.၃၉ လက်မခေါက်။ ၆.၆ လက်မရှေ့သို့ခေါက်)
Processor ကို modong အဖြစ် Balong 980 နှင့်အတူ Kirin 5000
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 512 GB ကို
နောက်ကင်မရာ 40 MP အကျယ်ထောင့် + 16 MP Ultra wide angle + 8 MP တယ်လီဖုန်း
ဆက်သွယ်မှု 5G Dual Sim Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a /b/ g / n / ac USB-C
အခြားအင်္ဂါရပ်များ NFC Fingerprint Sensor ဘက်မှာ
ဘက်ထရီ 4.500W Huawei SuperCharge နှင့်အတူ 55 mAh
ရှုထောင့် အထူ ၁၁ မီလီမီတာခေါက် (၅.၄၉ မီလီမီတာ ဆက်၍)
စြေး 2299 ယူရို
Huawei သည်ဤဖုန်းနှင့်ဘာလုပ်သည်ကိုသိသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် ၈ လက်မဖန်သားပြင်ရှိသောဤမော်ဒယ်လ်နှင့်အတူခေါက်ထားသည့်ဖန်သားပြင်၏အစိတ်အပိုင်းထဲသို့ ၀ င်သည်။ ခေါက်တဲ့အခါ ၆.၃၉ လက်မစမတ်ဖုန်းဖြစ်လာသည်, ဖုန်း၏နောက်ကျောအပေါ်တစ် ဦး ထောက်ခံမှုအဖြစ်အလယ်တန်းမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအထူသည်စက်၏အဓိကကျသောကဏ္ aspect ဖြစ်သည်။ ဤဖုန်းအမျိုးအစားများအတွက်အလွန်ပါးလွှာသည်။
ဖွင့်တဲ့အခါမှာ, ဒီ Huawei Mate X က ၈ လက်မမျက်နှာပြင်နဲ့ချန်ထားပေးတယ်။ ဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကျနော်တို့ကထစ်, အပေါက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘာမှမတှေ့ဘူး။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှေ့ကင်မရာမရှိပါ။ ဖုန်း mode ကိုခေါ်။ ပထမသို့၎င်းကိုခေါက်ထားရမည်။ ကိရိယာ၏နောက်ဘက်ကင်မရာများသည်ထို selfies များအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
Huawei Mate X - ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုထူးခြားမှုတစ်ခုအဖြစ်
ဤစမတ်ဖုန်းတွင်ခေါက်ထားသည့်စနစ်သည်ခလုတ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းတွင်အစိတ်အပိုင်းပေါင်း ၁၀၀ အထိရှိပြီးမျက်နှာပြင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲမိမိကိုယ်ကိုခေါက်ထားနိုင်စေရန်အတွက်သုံးနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်။ ခေါက်တဲ့အခါ, ငါတို့ရှိသည် ၁၁ မီလီမီတာအထူရှိပြီး ၅.၄၉ မီလီမီတာသာရှိသည်။ သံသယကုမ္ပဏီအဘို့အစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည့်ဤကိစ်စတှငျတကယ်ပဲဒဏ်ငွေ။
Huawei Mate X ၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်သည်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကစာဖတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူကြောင်း၊ ၎င်းတွင်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ထုတ်ကုန်၏ဤတင်ပြချက်တွင်၎င်းတို့သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆိုင်ရာ application များကိုအလေးထားလိုကြသည်။ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများအားစွမ်းရည်ပေးထားသည် split screen mode မှာအလုပ်လုပ်ကြသည်အချို့သောအက်ပ်များအတွက်မျက်နှာပြင်၏တစ်ဝက်စီကိုသီးခြားဖန်သားပြင်တွင်အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်လည်းသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကောင်းသောမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ 5G ပါ ၀ င်သောပထမဆုံးတံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အဲဒါအတွက် Balong 5000 modem ကိုသုံးပါ Huawei ကိုလွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည် Kirin 980 ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါတို့အမှတ်တံဆိပ်၏ Mate 20 နှင့် 20 Pro ကိုအတူတူပါပဲ။ ဒီ modem သည်အမြန်နှုန်းကို 4,6 Gbps အထိ download လုပ်နိုင်ရန်အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ကပိုင်နက်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်။ ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီကဒီကပြောပါတယ် Huawei Mate X သည် 3GB ရုပ်ရှင်တစ်ခုကို ၃ စက္ကန့်အတွင်း download လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၄၅၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသောဘက်ထရီပါရှိသည်။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်သည် အများဆုံးဒီကဗျာက၎င်း၏အလျင်မြန်စွာအားသွင်း, 55W ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စျေးကွက်အတွင်းတွင်အလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းမှုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မိနစ် ၃၀ အတွင်းဖုန်းကို ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည်။ ဤအလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းမှုကို Huawei SuperCharge အမည်ဖြင့်ရရှိသည်။
တစ်ချိန်ကဤ Huawei Mate X ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလူသိများသည်စတိုးဆိုင်သို့မည်သည့်စျေးနှုန်းရောက်ရှိမည်ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည့်အချိန်ကိုသိရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ အကယ်၍ Samsung ၏ထုတ်ကုန်သည်လူအများအား၎င်း၏စျေးနှုန်းမြင့်မားမှုနှင့်အတူစိတ်ပျက်စေခဲ့လျှင်၊
ကောင်းပြီ၊ ဤကိစ္စတွင်အသုံးပြုသူများစွာအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီ Huawei Mate X ရဲ့စျေးနှုန်းက Samsung ပစ္စည်းတွေမှာတွေ့ရတာထက်ပိုများနေလို့ပဲ။ Device ၏တင်ပြချက်အရ 8 GB RAM နှင့် 512 GB Internal Storage ပါရှိသည်။ ယူရို 2.299 ၏စျေးနှုန်းမှာ.
ယင်းကိုလွှတ်ပြီးသောအခါ ယခုနှစ်လယ်တွင်စတိုးဆိုင်များတွင်ဖွင့်လှစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ တိကျတဲ့ရက်စွဲကိုမသတ်မှတ်နိုင်သေးပါ၊ သို့သော်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီထံမှအတည်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei Mate X: Huawei ၏ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်